Nsonaazụ nke COVID-19 juru ebe niile, yana ọchịchọ maka ịmịnye ngụgụ na United States na-arị elu
Carelọ ọrụ nlekọta kpụ ọkụ n'ọnụ nke California Medical Center. ABC News kwuru na Joshua Garza, nwoke dị afọ 43 si Texas, nwere ntụgharị ume akpa ume abụọ n'ihi na ọ bu COVID-19. O chere na ọ dịghị mkpa ka a gbaa ya ọgwụ mgbochi megide COVID-19. Ugbu a, ọ kpọkuru ndị mmadụ ka ha gbaa ọgwụ mgbochi, ...
Atọ ihe mere eji etinye masks mgbe ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na ọgwụ mgbochi COVID-19-19
Ruo ọnwa ole na ole, ị na-ịtụ ahịa maka ịpụ apụ, kagbuo atụmatụ njem gị, ma kpachara anya na kọmputa. Obi nwere ike ịtọ gị ụtọ ma ị chọpụta na ịnwere ike ịhapụ onwe gị mgbe ejiri ọgwụ mgbochi COVID-19-19 gbaa ọgwụ mgbochi. Agbanyeghị, ihe adịghị mfe ... P Pfizer's na ModernaR
Usoro ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na UK fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 60%, ọ ka siri ike ịkwụsị mgbasa nke nje a na-agbanwe
Dị ka nkwupụta ụkpụrụ omume si kwuo, COVID-19 agbadawo na Germany na nso nso a. N'ihe dị ka ụbọchị 9, ọnụọgụ ọrịa na Germany agbadala na 23 n'ime ụbọchị 7 gara aga. Steeti etiti ewebatala ọtụtụ usoro ịtọpụ, dịka ịmaliteghachi nkuzi ihu na ihu, iwepu o ...
Ihe kariri okwu 300,000 na-abawanye, kpọnwụrụ akpọnwụ, oxygen na-aga ịgba ọsọ, India abụrụla ebe ọrịa na-efe efe n'ụwa (COVID-19)
N'oge na-adịbeghị anya, ọnọdụ ntiwapụ nke gburugburu ụwa na-adịgide adịgide, mana otu mba ka na-akawanye njọ na nnukwu mmiri, na-enwe ihe karịrị 300,000 ikpe na-abawanye, na usoro ahụike mba dị nso na-ada. Obodo a bụ- India. Enwere ụkọ saịtị ịkpọ ozu ọkụ na nkụ m ...
Ọrịa nke atọ nke ọrịa na-abịa! Tụlee imechi obodo ọzọ?
Site na mgbasa nke nje a na-agbanwe agbanwe, agba nke atọ nke ọrịa na Europe na-abịa. Ọtụtụ mba amalitela usoro mgbochi ahụ. Onye ozi ahụike German kwuru na 27th na a na-atụle ọhụụ ọhụrụ nke "imechi obodo". Banyere 27th, ọnụ ọgụgụ nke ikpe ọhụrụ enen ...
Zhong nanshan: enweghị ike ikpochapụ ndị mmeri ọhụrụ mana enwere ike ịchịkwa ya
Mba ọ bụla na mgbochi na njikwa ọrịa nwere ike ịnweta. Na ngwụcha Machị 2, nzukọ ọmụmụ mba mba ụwa nke ọkachamara nke mgbochi na njikwa ọrịa, zhong na ndị ama ama ama ama ama na Amerịka na-ebute ọrịa na-efe efe, na-atụle isiokwu ndị dị ka nkwado mmegide ọrịa gburugburu ụwa. Zho ...
AKW CKWỌ AKWERKWỌ AKW -KWỌ AKW :KWỌ: 19: Ndị gara aga mba Iran na-ere ahịa nwụrụ n'ihi COVID-19, mgbe ọ dị afọ 45
Dabere na ụlọ ọrụ mgbasa ozi alakụba nke ala Islam nke Iran kwuru na ndị bụbu ndị otu egwuregwu bọọlụ nke Iran nwere ike bụrụ ndị na-ere ahịa n'ihi ọrịa oyi COVID-19 na Jenụwarị 21, a kpọgara nlekọta kpụ ọkụ n'ọnụ nke otu ụlọ ọgwụ n'isi obodo ya, Tehran. N'abalị iri abụọ na asaa nke ọnwa Jenụwarị, ndị ahịa mina nwụrụ, mgbe ọ dị afọ ...
Dọkịta na-ekwu, sị: COVID - 19 nke mmebi ngụgụ dị njọ karịa ị smokingụ sịga
Otu dọkịta na-awa trauma kemgbe njem iji mesoo ndị ọrịa nwere ọtụtụ puku coronavirus, ọ dọrọ aka ná ntị na oke mmanya nwere ike imetụta ọtụtụ ndị lanarịrị COVID - 19. Brittany, klas g DE Kendall (Brittany Bankhad Kendall) dere na twitter, Dr COVID - 19 mgbe ngụgụ ”Mara mma karịa ka anyị nwere ...
Ndị uwe ojii France emechiela nnọkọ oriri na ọ carụ forụ maka imebi ihe mgbochi covid-19
Ndị uwe ojii France emechiela nnọkọ oriri na ọ forụ forụ maka imebi ihe mgbochi 19-ọtụtụ narị ndị uwe ojii French na Saturday mechiri iwu na-akwadoghị Carnival Party na northwest France ebe ọ bụ na afọ ọhụrụ gafere, na-eleghara usoro ị ga-anọ na mgbochi coronavirus na nnukwu oriri. N'oge na-adịghị anya mgbe nnọkọ ahụ malitere na ...
B MASA IKU IKU EKPU-EME DI MKPERYRERY D AND MKPA NA D N MKPA.
Onye isi ala German Angela merkel ọhụụ nchọpụta nje ọhụụ ọhụrụ na marolon okwu mkparịta ụka Marolon na Angela merkel gara mmemme. Netwapụ esenidụt na Disemba 17, dị ka otu akụkọ dị na netwọọdụ satịlaịtị Russia, gọọmentị German kwuru na 17, mgbe nzukọ EU gasịrị, Germ ...
Kedu ihe ị ga-amata tupu ịzụta ihe nkpuchi KN95 Nchedo?
Gbaso ntuziaka ndị a gbasara iji na ikpofu ihe mgbochi ihu ihu iku ume nke KN95 dị mkpa iji dobe ahụike gị na nke obodo gị. Ọ bụrụ na iku ume KN95 gị mebiri emebi ma ọ bụ metọọ ya, maọbụ ọ bụrụ na iku ume siri ike, ị kwesịrị iwepu iku ume ahụ, tụfuo ya pro ...
Okpukpe Nchedo Onwe Onye Ozo PPE bụ ndebiri nke akụrụngwa nchekwa onwe onye. Nọmba ntuziaka ochie bụ 89/686 / EEC, nke ọhụrụ bụ 2016 / 425. Na European Union na mpaghara akụ na ụba Europe, ọrịre nke ihe nchekwa onwe onye (PPE) ga-agbaso ...